''Jijjiiramaaf fedhiin jiraachuu mullisa, fedhiin qofti garuu gahaa miti' - BBC News Afaan Oromoo
Hasawaa hanga ammaatti Minisitirri Muummichaa Dr. Abiy Ahimed taasisan fedhiin jijjiiramaa jiraachuu mullisu. Fedhiin jiraachuun garuu gahaa miti. Keessumaa haasawa Finfinnee galma Barkumeetti taasifame kan 'Konfiraansii Waadaa Jaalalaafi Tokkummaa' jedhamerratti taasisaniin, biyyattiin rakkoo hamaa keessa jirtu keessaa ba'uudhaaf kallattii addaa akka barbaachisu dubbataniiru.
Hasawaa Ministirri Muummichaa Dr. Abiy Ahimed taasisan akkamitti ilaaltan jechuun BBC'n Yunvarsiitii Keel kan magaalaa Landanitti argamutti barsiisaa seeraa kan ta'an Dr. Awol Qaasim Aloo gaafateera.
Dr. Awolis haasawaa Ministirri Muummicha naannoo Somaalee Itoophiyaatti, Ambootti, Maqaleetti, akkasumas Dilbata darbe Finfinnee galma Barkumeetti taasisan yeroo hubannu fedhiin jijjiiramaaf akka jirudha. Kutannoonis hanga tokko akka jiru waan mullisudha. Haasawaan hanga ammaa uummataaf mirkaneessuuf, akkasumas waadaan seenamaa jira jedhu Dr. Awol.
Fedhiin akka jirus mullisa. Haata'u malee, fedhiin qofaasaatiin ga'aa miti akka barsiisaan seeraa kun jedhanitti.
Ministirri Muummee heera biyya sanaa keessatti haangoo guddaa qaba
Ministirri Muummichaa kun haasawaa taasisan turan keessatti jijjiiramoota bu'uuraa gama seerota adda addaa kan akka haqaa, qaamolee nageenyaa, humna waraanaarratti fiduun qaba jechuun onnachuun dubbachaa turan. Garuu haala qabatamaa biyyattiin keessa jirtuun garuu carraa maal qabu gaaffii jedhuus akkasitti deebisu Dr. Awol. "Mootummaan keessattuu Ministirri Muummee heera biyya sanaa keessati haangoo guddaa qaba.
Dura ta'aa waraanaas kan dhimmi nageenyaa sababii kamiiniyyu hojiirraa hari'uu ni danda'a. Akka haangootti hojiirraa hari'uuf sababiiyyu hin barbaachisu. Kunis haangoo heerri kennuuf waan qabuuf.
Garuu haala qabatamaan paartiin ittiin hojjetu xiqqoo walxaxaa ta'uu danda'a, garuu paarticha keessattis deggersa jabaa waan qabuuf jijjiiramni dhufuu qaba jedhamee akka paartiitti itti amanamee jira, akkasumas yeroo dheeraaf irratti mariyatanii kan irratti waliif galanis waan ta'eef tarkaanfii kana fudhachuuf hiree guddaa qaba natti fakkaata," jedhan Dr. Awol. Akka ogeessa kanaatti gaaffiin guddaan hiree kanatti qaroominaan hangam itti fayyadama kan jedhudha.
Jijjiirama inni fiduu danda'u maalidha?
Jijjiiramumti inni fiduu danda'u kun ammoo maalumadha laata? Hanga'ootuma kana wal jijjiiruumoo hojmaata sirreessuun itti hin cimuu laata, seerri nuti baasnu kan uummanni ittiin shorokkaa'u ta'uu hin qabu jechuun dubbachaa turan Ministirri Muummichaa kun. Kun akkam ta'a, garamittis deema gaaffii jedhuuf Dr. Awol, seera jijjiiruun ni danda'ama jechuun BBC'tti himan.
Fakkeenyaaf jedhu Dr. Awol, seera farra shorokkeessummaa jedhamuun beekamu, seera dhaabbileen gargaarsaa, akkasumas seera miidiyaa kan gaazexeessitootarratti ba'an keessaa gariin isaa kan guutummaan guutuutti haqaman ni jira; gariin ammoo kan fooyya'uu qaban ni jiru.
Kanarratti mootummaan hojjechuu ni dand'a, waanti dhorku tokkoyyu hin jiru, jedhan. Abbaan alangaallee walaba ta'uu qaba. "Kanaaf, sadarkaa dhaabbileetti waantonni taasifamuu qaban ifa ta'an waanota baayyeetu jiru jechuudha," jedhan.
Dhimmoota jijjiiramni keessatti barbaachisu jechuun Ministirri Muummichaa kaasan keessaa sirna haqaa bilisaafi loogii ala taasisuu, rakkoo sharafa alaa maqsuufi filannoo dorgommiin sirriifi amanama ta'e gaggeessuu kanneen jedhan keessatti argamu.
Sirna haqaa foyyeessuuf waantota sadii sirreessuun akka barbaachisu ogeessi seeraa Dr. Yaared Laggasaan ni dubbatu. Akka ogeessa kanaatti, kan jalqaba ta'uu qabu lakkoofsa ogeessota seera fedhii bal'aa jiru waliin walqixxeessuudha.
Kan lammaffaa ammoo, malaamaltummaa sirna haqaa keessatti mullatu maqsuudha, akka Dr. Yaareditti. Kana gochuufis, namoota yakka malaamaltummaa raawwatanirratti addabbii barsiisaa ta'e fudhachuudha jedhu. Kana malees, walabummaan dhaabbilee haqaa akka mirkanaa'uuf hojjechuun murteessaa ta'uu dubbatu.
Filannoon haqa qabeessa ta'e biyyattii kana keessatti akka jiraatu
Filannoon haqa qabeessa ta'e biyyattii kana keessatti akka jiraatu nan hojjedhaa jedhan Ministirri Muumichaa kun. Filannoodhaaf yeroo gabaabaa qaba, kunis naannoo waggaa lamaati gaaffii jedhuuf ammoo, Dr. Awol waggaan lama yeroo guddaadha jedhu.
Gaaffiin guddaan dirree siyaasaa banuun boordii filannoo ijaaruu, namoota bilisa ta'aniifi kan dhaabbileen siyaasaa amantaa irraa qabaniin oganamuus qaba, jedhu.
Jijjiirama humna waraanaafi nageenyaa keessatti
Ajajaan Humna Waraanaa qilleensaa Itoophiyaa duraanii Jeneraal Ababaa T/Hayimaanot gama isaaniitiin akka jedhanitti, humna ittisaafi nageenyaa keessatti jijjiirama fiduun barbaachisaadha.
Jeneraal Ababaa''Raayyaan ittisa biyyaa seeraafi heera biyyattiif bitamaa ta'uun osoo irra jiruu garuu 'da'oo Dimokiraasii Warraaksaa ta'eera'. Kun ammoo heeraa mootummichaafi lammilee Itoophiyaaf dhaabbachuun hafee da'oo dhaaba tokkoo qofa ta'eera" jedhu.
Jeneraal Ababaan dabalataan, " Akkan haasawaa Ministira Muummichaarraa dhaga'etti dhaabbileen humna ittisaafi nageenya biyyaa seeraafi sirna heera mootummaarratti qofa hundaa'uun hojjetu jedhan. Kun yaada deggeramudha'' jedhan.
Ministirri Muummichaa haasawaa hirmaattonni kuma 25 ta'an irratti dhimma rakkoo sharafa alaa biyyattii mudachaa jiru kaasanii, rakkoo dinagdee biyyaarratti qaqqabsiisaa jiru hambisuufis tarkaanfiiwwan akka fudhataman dubbataniiru.
Rakkoo sharafa alaaf maaltu fala?
Ogeessi Dinagdeefi gorsaan invastimantii Obbo Getaachoo T/Maariyaam, rakkoo sharafa allaa furuudhaaf karaa kanaan dura yaalameen taanaan waanti haarawaan ni uumama jedhanii akka hin amanne dubbatu.
Akka Obbo Getaachootti, dinagdeen biyyattii akka si'ataa ta'uuf, akkasumas rakkoo sharafa alaa maqsuudhaaf tarkaanfiiwwan fudhatamuu qaban keessaa qulqullina omisha alatti ergaman foyyeessuufi gabaa biraa barbaaduurratti xiyyeeffannaan hojjetamuudha.
Gaaffiin guddaan eegamu qabatamaan hojiitti jijjiiruudha
Haasawaa Ministirri Muummichaa hanga ammaatti taasisan dhimmoota hedduu barbaachisoo ta'aniifi uummata sadarkaafi bakka gara garaa jiru mara ilaallatu ta'ee qalbii namootaa seeneera. Haasawaan isaanii kun kan uummanni bal'aa waggoota dheeraaf mootummaa gaafataa turan of keessatti akka qabatu ogeessonni BBC'n haasofsiise ni dubbatu. Gaaffiin guddaan caalmaatti eegamu qabatamaan hojiitti jijjiiruu akka ta'edha.